Bakemonogatari वर्थ हेर्दै छ? - पालना दृश्य
by Dima 18 अगस्ट 2020 12th जनवरी 2022
1 टिप्पणी Bakemonogatari मा हेरिएको छ?
बेकेमोनोगटारी र मोनोगाटारी श्रृंखला जेनरियलमा एनिमे फ्यानहरूका बीच धेरै लोकप्रिय छ र यो फ्यानहरूको लागि लामो चलिरहेको एनिमेस देखिन्छ। त्यसोभए यस एनिमलाई दर्शकहरूले हेर्नका लागि यति चाखलाग्दो बनाउँछ। हामी यस ब्लगमा भित्र पस्ने छौं त्यसैले पढ्न जारी राख्नुहोस्। तिनीहरू बिग्रेको धेरै या यस ब्लगमा केहि हुन जाँदै छैनन् त्यसैले कृपया पढ्न जारी राख्नुहोस्। बेकेमोनोगाटारीले एक कलेज कलेजको विद्यार्थीको कथालाई अनुसरण गर्छ जो एक भ्याम्पायर आक्रमणबाट बच्दछन्। उसको पछाडि मुठभेडहरु के हुन् एपिसोडको बहुमत बनाउँछ। तपाईं बेकेमोनोगाटारीको पक्षमा जानु भन्दा पहिले यस कथाको विस्तृत रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले त्यसलाई हेर्नु पर्छ कि पर्दैन। म पनि अब देखि BKMG को रूप मा Bakemonogatari को संदर्भित गर्दै छु किनकि म सक्छु।
मुख्य कथा - Bakemonogatari वर्थ हेर्दै छ?
"Bakemonogatari" बाट लिइएको
Bakemonogatari को कथा धेरै जटिल छ र तपाइँ यसलाई बुझ्नको लागि तपाइँले "Bakemonogatari" शब्दको अर्थ के हो भनेर एक क्षण लिन आवश्यक छ। जापानीमा "बेक" को अर्थ अ English्ग्रेजीमा "भूत" र अंग्रेजीमा "मोनोगटारी" को अर्थ "कहानी" हुन्छ, त्यसैले बेकमोनोगाटारीको अर्थ "भूत कहानी" हो। तर यो सबै होइन। यसले मुख्य पात्र अरारागी प्रस्तुत गर्दछ जुन पहिले एउटा भ्याम्पायर आक्रमणबाट बचेको थियो। यद्यपि उनको कथामा उनी जापानका केही भागमा केटीहरूलाई उनीहरूको सहयोग / राक्षस समस्याहरूको साथमा सहयोग गर्दै छन्। यो सुरु हुन्छ जब ऊ केटीलाई पूर्ण वा सायद कुनै पनि वजन संग गवाही दिन्छ। हो, ठिकै छ, उनी केवल तौल केहि किलो भन्दा कम मलाई लाग्छ। उनी हलवेको माथिबाट गिर्छन् र प्रतीकात्मक रूपमा उनको अगाडि झर्छिन् जहाँ उनी उनलाई समात्न अगाडि बढ्छिन्, यहीं उसका गोप्य कुरा प्रकट भएको छ। त्यहाँ Bakemonogatarari मा प्रतीकवाद को एक धेरै छ र यो पछि एपिसोड मा धेरै अधिक प्रचलित हुन्छ।
उसले ती दुबैलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो तर शुरुको भागमा सेन्ज्‍यौगौराले अररागीलाई रेजर र स्टेपलरले धम्की दिन्छ। उनी केहिमा उनी माथि गइन् जुन मैले थाहा पाइन कि यो के हो, तपाईले यसलाई हेर्दा फेला पार्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ कि उनले यो स्पष्ट पार्छिन् कि उनले शारीरिक समस्या ल्याउँछिन् यदि उनले उनको समस्यामा सहायता गरेन भने। तर कहानी क्रमबद्ध एक धेरै अनौंठो तर फ्लो प्रकार मार्गमा संगै। यसले संगीतको माध्यमबाट गर्छ र यसले दृश्यलाई एक अर्कामा जोड्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि प्रत्येक दृश्य एक दृश्यबाट अर्को दृश्यमा लुकिन्छ तर मेरो विचारमा संगीतले यस समग्र उपस्थितिलाई बन्द गर्नबाट रोक्छ, जुन उत्तम हो। मैले जोड दिनुपर्दछ कि बेकमोनोगाटारी जत्तिकै जापानी शृ .्खलाहरू जस्तै ग्राफिक र हिंस्रक छन्, तिनीहरूले पनि खुलेआम बच्चाहरूलाई यौनिकरण गर्दछन्, जुन तपाईंले दुर्भाग्यवश बेवास्ता गर्नुपर्नेछ, किनभने यो यस्तै धेरै एनिममा व्याप्त छ।
यो केटीको साथसाथै ऊ अर्को केटीमा दगुर्छ जसको बाँया हातमा बाँदरको पाखुरा जोडिएको छ। कहिलेकाँही, उनको नियन्त्रण बिना बाँदर हातले काम गर्न सक्छ कि उसले मद्दत गर्न सक्दैन। यो अरारागी कुनको समय उनको सहयोगी हो र उनी पनि उसलाई सहयोग गर्न Senjyogouhara को मद्दत प्रयोग गर्दछ। यो पनि थाहा छ कि उनी उनीसंग यौन आकर्षण थिई तर उनी वास्तवमै केहि गर्दैन। त्यहाँ बीकेएमजीमा प्रतीकात्मकता धेरै छ र यो कहिलेकाँही वा प्रायः महत्त्वपूर्ण समयको हुन्छ, र तिनीहरू चित्रमा चित्रण गरिएको कहानीसँग प्रासंगिक हुन्छन्। उनीहरूमा मानवीय कलाकारहरू छन् र यसले तिनीहरूलाई धेरै सम्झनादार बनाउँछ। हामी तपाईंहरू किन हेर्नुपर्दछ र किन तपाईंले बेकमोनोगाटारीलाई एक क्षणमा नहेर्नुपर्दछ भन्ने कारणहरूमा जाँदै छौं तर कृपया मुख्य चरित्रलाई हेर्नको लागि केही समय लिनुहोस्।
अरारागी एक घोंघा श्रापको सामना गर्छिन् जसले उसलाई सानी केटीको apparition हेर्न अनुमति दिन्छ। स्नेल श्राप एकदम खतरनाक हो भनिन्छ र यसले कुनै पनि मानवलाई सराप्न सक्छ, यद्यपि हामी पक्का छैनौं कि अरारागी मानव हो वा होइन, जसलाई भ्याम्पायरले काट्यो।
मुख्य पात्रहरू - Bakemonogatari वर्थ हेर्दै छ?
कोयोमी अरारागी यो शृ for्खलाको मुख्य पात्र हो र ऊ पूरै श्रृंखलाको लागि मुख्य पात्र हो। हामी उसको पीओवीबाट सबै चीज देख्छौं र प्राय: जसो समस्याहरू उसको प्रयोगबाट समाधान हुन्छन्। ऊ सामान्य १ - - १ year वर्ष पुरानो जापानी केटको लागि सम्बन्धित छ।
मैले मुख्य रूपमा आफैलाई धेरै प्रयास गरिरहेको थिएँ जुन उसले कोशिश गर्छ र के गर्छ उहाँ चीजहरूको बारेमा जान सक्ने तरिकामा तार्किक प्रकृतिमा हुनुहुन्छ र चरित्रहरूको सबैभन्दा तार्किक र तर्कसंगत हुनुहुन्छ जुन हामी बेकमोनोगाटारी र मोनोगाट्री श्रृंखलामा देखा पर्दछौं।
अर्को हामीसँग छ सेन्ज्यगौहरा, जो Araragi प्रेमिका हुन मानिन्छ। उनी उनकी प्रेमिका हुन् भनेर मानिन्छ तर मेरो धारणामा शृ through्खलामा सम्पूर्ण तरिकाले एक प्रोजेगनिष्टको जस्तो अभिनय गर्‍यो। उनी मेरो विचारमा धेरै अनौंठो थिईन् र उनको चरित्रले प्रयोग गरेको संवाद एकदम अनौंठो छ। मेरो विचारमा उनले वयस्कहरूले किशोर किशोरीहरूलाई एक्लै छोड्ने कुरा गर्दैनन्।
यदि म उनीसँग वास्तविक संसारमा आइपुगेँ र उसले मसँग कुरा गर्न सुरु गरिन भने मैले उनलाई सेक्सन गरें तर हुन सक्छ त्यो म मात्र हो। ऊ अप्ठ्यारोमा छिन र मेरो विचारमा अरारागीको चरित्रको कम छनोट। म अझै पनि बुझ्न सक्दिन किन यो मान्छेले सुरुमा उसलाई छोड्नुभएन, किनकि म लामो समय सम्म घडीमा छैन।
उप पात्रहरू - Bakemonogatari वर्थ हेर्दै छ?
कारण म यहाँ यी सबै पात्रहरू राख्दै छु र उनीहरूको लागि छुट्टै लाइनहरू लेख्दिन किनकि तिनीहरू सबै मात्र एपिसोडको बारेमा लिन्छन् वा शृ more्खलाको अधिक लिन्छ त्यसैले त्यहाँ त्यस्तो महत्वपूर्ण छैन। मलाई थाहा छ सेन्ज्इगुहारा जस्ता केहि बढी पाउछन् तर मेरो लागि म उनीसंग छुट्टै लेख्ने छैन। यो अरारागी हो जुन सबैभन्दा धेरै पर्दाको समय हुन्छ, र यसको कारण यो हो कि उहाँ जसले समस्याहरू समाधान गर्दै हुनुहुन्छ र केटीहरू उहाँकहाँ आउँदैछन् जब उनीहरूले थाहा पाए कि उनले सेन्जुगौहरालाई मद्दत गरे। धेरै जसो धेरै सम्झनादार थिए र तिनीहरूले सब पात्रहरू र मुख्य पात्रहरूको रूपमा राम्रोसँग काम गरे जब एपिसोड केवल उनीहरूमा केन्द्रित थियो।
मलाई लाग्छ तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि Bakemonogatari बाट पात्रहरू अविस्मरणीय थिए र यो एकातिर पूर्ण रूपमा सत्य छ। यद्यपि, म भन्न सक्दछु कि यो पूर्वनिर्धारित छ, बीकेएमजीको उत्पादन प्रभारी डिजाईन टीमले शानदार काम गर्‍यो र तपाई यो देख्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक एपिसोड चित्रण गरिएको तरिकामा। यो उत्पादनको सोनी स्तर हो जुन अर्थ हुन्छ किनभने तिनीहरू जोसँग वैसे पनि लाइसेन्स छन् (सोनी संगीत जापान)।
मलाई सेन्ज्यगौरा मन पर्दैनथ्यो, मलाई ओशिनो वा हनेकावा मन पर्दैनथ्यो, तिनीहरू सबै मलाई विरोधी मान्थे तर लेखकले हामी सबैलाई अरारागीको बिरुद्दमा सोच्न लगाउँदछन् किनकि यो यकिन छ कि यो कस्तो लाग्छ। मलाई मनपरायो कि अरारागीले आफुलाई सानी केटी हचिकुजीको रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिई, तर मलाई उनको अनुहारमा कुटपिट गर्ने दृश्य रहेको कुरा मनपर्दैन। मलाई थाहा छ कि यो एउटा apparition थियो र वास्तविक होइन तर तथ्य यो हो कि तिनीहरूले देखाए कि तिनीहरू मसँग बसेनन्
मुख्य कथा जारी छ - के Bakemonogatari वाच्य रहेको छ?
मेरा ओशिनो भन्ने व्यक्तिको मद्दत दर्ता गरेर अरारागी सेन्जीगुहारालाई उनको तौलको समस्यामा सहयोग गर्दछ। ओशिनो उनलाई सहयोग गर्न सहमत छिन् कि यदि उनी उनका अनौठो अनुरोधहरूसँग सहमत छन् र एउटा अनुष्ठानमा पेश गरी जुन श्राप वा एप्लिकेसनलाई पहिलो स्थानमा लिनबाट रोक्दछ, तब नै उनको ओजन समस्याबाट मुक्त हुनेछ। अब त्यसपछिको दृश्य मेरो लागि साह्रै रमाईलो थियो जब मैले यसलाई पहिलो चोटि हेरे र यो यो थियो किनभने जापानी मानिसका तस्विरहरूको प्रयोगबाट धेरै सन्दर्भहरू थिए।
केही कारणका लागि सेन्ज्यगौहराले अरारागी उनको प्रेमी ठान्छन् र उनी उनीमाथि लगातार जोड दिन्छिन् र केही भागमा उनलाई समातेर हिंड्छिन्, शारीरिक चोट पुर्‍याउँछिन्, उनीलाई हाँसोमा उडाउँछिन् र उनीलाई एक पटक मरे पनि। यो मलाई सेन्ज्इगुहाराको चरित्रको बारेमा मनपर्दैन र यसले मलाई बेकमोनोगाटारी हेर्दै गर्दा मलाई हेर्ने कुरा असह्य तुल्यायो। बाँकी श्रृंखला मूलतः अरारागी यस शहरमा उनीहरूको घुम्ती जाँदैछ र अन्य केटीहरूलाई (र ती सबै केटीहरू हुन्) समान प्रकारको अपरेसन समस्याहरूको साथ सहयोग गर्दै। यो कहानीको प्राय जसो बारेमा हो र यो श्रृंखलाको प्रगति हुँदै जाने बखत यो कथाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्छ।
Bakemonogatari मा प्रतीक - Bakemonogatari माथी हेरिरहेको छ?
Bakemonogatari धेरै प्रतीकात्मकता धेरै छ र यो धेरै दृश्यहरु लाई एक दर्शक छ कि प्रभाव उत्पादन मा एक ठूलो भूमिका खेल्छ। संगीत, प्रकाश, र संवादको पनि ठूलो प्रभाव छ, तर Bakemonogatari मा र सामान्यतया Monogatari श्रृंखला मा प्रतीकवाद धेरै प्रचलित छ। यो सामान्यतया एक वाक्य को प्रभाव व्यक्त गर्न वा घटना को एक कार्यको औचित्य गर्न प्रयोग गरीन्छ। यसले फ्ल्यासब्याकहरूसँग गर्दछ जुन त्यसपछि राम्रो प्रभावको लागि आवाज दिइन्छ।
कहिलेकाँही हामी वस्तुहरू पनि देख्छौं जसले एक दृश्यको कथामा भाग लिएका थिए जसमा स्टेपलर र रेजर जस्ता देखा पर्दछ जुन सेन्ज्इगुहाराले अरारागी र अन्य चीजहरूलाई धम्की दिन्छ जुन पहिलो अनुष्ठानसँग सम्बन्धित थियो। प्रतीकवाद अनुष्ठान दृश्यको छेउमा शुरु हुन्छ जुन श्रृंखलाको शुरुमा एपिसोडको नजिकै देखा पर्दछ जुन सेन्जुगुहाराको एपेरिसन समस्याहरू प्रस्तुत गर्दछ।
कटावे उपकरणहरूको प्रयोग - के बेकेमोनोगाटरी मूल्य हेरिरहेको छ?
हामी माथि देख्न सक्छौं कि श्रृंखलाले दृश्य देखि दृश्यमा परिवर्तन गर्न विभिन्न प्रकारका एनिमेसन शैलीहरू प्रयोग गर्दछ। सँगसँगै बिभिन्न दृश्यहरूलाई लि link्क गर्न संगीत प्रयोग गर्दा उनीहरूले यी कटवेहरू पनि प्रयोग गर्छन्, जुन प्रभावकारी नै छन्। प्रत्येक तस्विरलाई एकसाथ लिंक गर्न colors र colors्ग प्रयोग गर्नु प्रत्येक शटलाई जोड्ने उत्तम तरिका हो र यो पूर्ण रूपमा यहाँ गरिन्छ। सामान्यतया दृश्यहरू जोड्ने यो पनि राम्रो उदाहरण हो।
कारण यो हेर्ने लायक छ - के Bakemonogatari वाच गर्दै छ?
मूल एनिमेशन शैली
शोसँग धेरै फरक र सक्कली एनिमेसन शैली छ जुन यसलाई हेर्न अत्यन्त रमाईलो बनाउँदछ। श्रृंखलामा कलात्मक शैलीहरूको एक विशाल विविधता छ जुन यो नियमित रूपमा श्रृंखला मा प्रयोग गर्दछ।
एनिमेशन पोइन्टमा छ
इमानदारीपूर्वक दृश्यहरू यस श्रृंखलाको साथ अद्भुत छन्, त्यसैले म त्यसलाई एक पटक दिन्छु यदि तपाईं ती सबैमा हुनुहुन्छ भने। दृश्यहरू प्रायः एक मिनेट भित्र चंचल र हास्यास्पद पनि गम्भीर देखि स्विच गर्न सक्छन्। साथै ती श्रृंखलाभित्र विभिन्न कलात्मक शैलीहरू छन् जसले फरक कथा र उप प्लॉटहरू हाइलाइट गर्दछ। म भन्न चाहन्छु कि यो कोर्ने तरिका एकदम चासोको छ र मलाई यो तथ्यको लागि कोरिएको मार्ग मनपर्दछ। केहि दृश्यहरूमा समय विशेष गरी संगीतको साथ राम्रो छ। तिनीहरू एक अर्काको साथमा दृश्यहरू लिंक गर्न धेरै राम्रोसँग संगीत प्रयोग गर्छन्।
मलाई मन पर्छ कि कसरी कुनै दृश्यमा शटहरू जहिले पनि उही स्थानमा रहन्छन्, यसले अधिक तनावपूर्ण र उच्च प्रोफाइल बनाउँदछ जुन मँ भन्छु। शटहरू नियमित रूपमा स्थान परिवर्तन गर्दैन। म भन्छु कि बेकेमोनोगाटारी परम्परागत एनिमे भन्दा फरक छन्, केहि व्यक्ति र एनिमे हेराईहरू यसलाई रुचाउँदछन्।
भिजुअलहरू मोहित गर्दै
मनमोहक दृश्यहरू बीकेएमजीको साथ एक सामान्य उपस्थिति हो, र ती कहिलेकाँही ग्रेसियाका फलहरू जस्तै हुन्छन्, जुन उनीहरूलाई कम्तिमा प्रस्तुत गरिन्छ। म भन्न सक्छु तिनीहरू धेरै फरक छन् यद्यपि धेरै तरीकाले। प्रकाश र बनावट मेरो विचारमा विन्दुमा छन्, कहिलेकाँही प्रायः प्रवेश द्वारमा। म वास्तवमै BKMG लाई जानुहुन्छ जसरी मैले यसमा प्रवेश गर्न सुरु गरें।
उपयुक्त को प्रयोग ग्राफिक इमेजरी
यो वास्तवमा तपाई कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ, यो एकदम ग्राफिक र रमाइलो प्रकारको एनिमेस हो। यो केवल तपाइँको दैनिक anime मात्र होइन र यो शटहरूमा र संगीतसँगै प्रस्ट हुन्छ। चरित्रहरूमा केन्द्रित गर्न श्रृंखलाले शटहरू प्रयोग गर्ने तरिका उत्तम छ र यसले श्रृंखलामा यस्तै राम्रो गर्दछ। मैले फेला परेको भनेको बेकेमोनोगाटारीले दृश्यहरू प्रयोग गर्दछ जुन केहि भावनाहरू व्यक्त गर्न ग्राफिक हुन्छ। म यसका लागि सबै नै हुँ तर केही व्यक्तिहरूलाई यो मन नपर्न सक्छ, जस्तै ब्ल्याक लगून र अन्य एनिमेसले यी प्रकारका दृश्यहरू धेरै प्रयोग गर्दछ जस्तो देखिन्छ र यसले अन्य दृश्यहरू भन्दा केही दृश्यहरू अधिक गहन र आकर्षक बनाउँदछ।
Bakemonogatari - Bakemonogatari वाच्य छ?
अनुसरण गर्न कठिन कथा
यदि तपाईं कथामा जान चाहानुहुन्छ भने यो एकदम कठिन काम हुनेछ। Bakemonogatari का पहिलो केही एपिसोडहरू मेरो विचारमा अनुसरण गर्न र बुझ्नको लागि धेरै गाह्रो छ। यसले उनीहरूलाई हेर्न र श्रृंखलामा जानको लागि तपाईंको क्षमतालाई असर गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि यो वास्तवमै पर्याप्त रूपमा वर्णन गरिएको छैन, केही भ्वाईस ओभरहरू केहि एपिसोडहरूको सुरूमा दिइन्छ तर यसले वास्तवमा के हुँदैछ भनेर विस्तृत व्याख्या प्रदान गर्दैन। स्पष्ट रूपमा यदि तपाइँ म the्गा पढ्नुहुन्छ भने यस शृ much्खलाको साथ तपाईंलाई धेरै समस्या हुने छैन किनकि तपाईंलाई के हुँदैछ भनेर थाहा छ तर पहिलो पटक दर्शकहरूको लागि तपाईंलाई केही समस्या हुन सक्छ जस्तै मैले गरें।
म निश्चित छु कि म एक मात्र त्यस्तो मानिस होइन जसले बेकेमोनोगटारीभर प्रश्न सोध्दै थिए तर कहिलेकाहिँ मलाई कुनै संकेत थिएन कि दृश्यमा केहि घटनाहरू घट्यो र अरारागीलाई यस किसिमका पात्रहरूसँग सम्बद्ध गर्न कसरी सम्भव थियो। विशेष गरी Oshino। कसरी ती दुई बाटोहरू पार गर्ने थियो? मलाई कुनै विचार छैन र यसले मलाई कुनै अर्थ दिएन। मैले मूल दृश्यमा पुन: हेर्ने स्वतन्त्रता लिएँ र अझै पनि अरारागी ओशिनोलाई कसरी चिने, कसरी र कहिले उनीसँग सम्बद्ध भए र सेन्ज्यागुहारासमेत उहाँसँग पहिलो पटक जानको लागि किन वाक्क पारे भनेर कुनै विवरण पाउन सकेन। यो श्रृंखलामा दोहोरिने विषयवस्तु हो र यो लेख लेख्नु अघि म निश्चित थिएँ कि म सहि थिएँ। अरारागी भन्छिन् कि ओशिनो नै उसलाई सहयोग गर्न र मानवमा "फर्किन" सहयोग गर्न सक्षम थिए, तर उनले अरु कुनै व्याख्या प्रस्तुत गरेन।
सामान्य यूnlikable वर्णहरु
धेरै व्यक्तिहरू यससँग मसँग असहमत हुन्छन् तर मँ त्यसमा पस्नु पर्छ। मलाई Bakemonogatari का पात्रहरू मनपर्दैन, यो मेरो राय हो त्यसैले कृपया मलाई सुन्नुहोस्। मुख्य पात्र अरारागी बोल्न साह्रै बोरै छ र उसले संवादमा केही फरक पर्दछ जब उसले सेन्ज्ग्हौरा वा अन्य उप पात्रहरूसँग केहि छलफल गरेको थियो। तपाइँ सेन्ज्युगौराको कष्टप्रद र अड्किने चरित्रको साथसाथै अन्य उप पात्रहरू जस्तै कनबरुसँग सर्तमा आउनुपर्नेछ।
म स्पष्टसँग भन्न सक्दिन कि सेन्ज्यगौहराका लागि वार्ता गर्ने तरिका अवास्तविक थियो तर म भन्न चाहन्छु कि उनले संवाद निर्माण गर्ने तरिका अनौठो थियो। म मात्र वर्णन गर्न सक्दछु एक a० बर्षे मानिस जसलाई १ man बर्षे उमेरका केटीहरूको शरीर भित्र फक्रिएको छ, जसको कारणले मलाई यो लेखिएको छ कि कसले देखेको अनुमान लगाउँछ।
शंकास्पद मुख्य चरित्र
मुख्य चरित्रको बारेमा मलाई मनपर्ने केहि पनि पाउन सकिनँ, उहाँ एक असल चरित्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्यलाई भन्दा। मेरो मतलब यो हो कि उसले प्राय जसो केटीहरूलाई सहयोग पुर्‍यायो जो आयो वा आयो उहाँसँग सहायता माग्दै, र यो कुनै अर्थमा प्रशंसनीय छ। यद्यपि त्यहाँ अरारागीसँग सम्बन्धित केही दृश्यहरू छन् जुन मैले भर्खरै डरलाग्दो र अनौंठो पाएँ। तिनीहरू केवल अनैतिक प्रकृतिमा पनि थिए र यदि तपाईंले पहिले BKMG देख्नुभयो भने तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ म के बारेमा कुरा गर्दैछु, विशेष गरी दृश्यहरू हाकिकुजी र सेन्गोकूसँग सम्बन्धित। मलाई थाहा छ यो केहि एनिमेको साथ एक दोहोरिएको विषयवस्तु हो र अरारागीको चरित्र समीक्षा गर्दा मैले समस्या सामना गरें।
टाइम्समा धेरै ग्राफिक
बीकेएमजीमा केहि दृश्यहरू धेरै ग्राफिक छन् र यो हिंसा देखि सेक्ससम्म केहि पनि हुन सक्छ। यदि तपाईं ती सबैमा हुनुहुन्न भने सायद बेकेमोनोगाटारी तपाईंको लागि होइन किनकि यस प्रकारका दृश्यहरू BKMG मा प्रशस्त छन्। त्यहाँ यौन र हिंसात्मक दृश्यहरू सीधा बच्चाहरू संलग्न छन्, जो नैतिक कारणहरूले गर्दा म सहमत छैन। यस प्रकारका दृश्यहरू प्रत्येक अन्य एपिसोडमा हुन् जुन म भन्छु र तपाईं छिट्टै वा पछि उनीहरूमा आउँनुहुन्छ यदि तपाईं हेर्न थाल्नु भयो भने, केवल बाहिर वा उनीहरूलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, केवल सल्लाह मैले प्रस्ताव गर्न सक्छु, वा तपाईं ती मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ। ।
निष्कर्ष - Bakemonogatari - यो हेरिरहेको लायक छ?
Bakemonogatari एक धेरै फरक र अनौंठो अनुभव प्रदान गर्दछ जुन विगत केही वर्षमा मैले कवर गरेको एनिमेसनको जस्तो छैन। एनिमेसन शैली, संवाद, ध्वनि डिजाइन, शट्स, साउन्डट्र्याकहरू र समग्र सौंदर्य निश्चित आदरका लागि निश्चित रूपले आकर्षक छन्। यस श्रृंखलामा लगभग प्रवेश गर्ने भिजुअलहरू छन् जुन त्यहाँ अरू धेरै श्रृंखलाबाट माथि हुन सक्दैन र म श्रृंखलाको बारेमा सोच्न सक्दिन जुन आफ्नो डिजाइनमा बेकेमोनोगाटारी र मोनोगाटारी श्रृंखलाको रूपमा मौलिक छ। यस श्रृंखलामा पहिलो शुरुका एपिसोडहरू आउन गाह्रो हुनेछ जब तपाईं पहिलो सुरू गर्दै जानुहुन्छ, तर मलाई थाँहा थिए कि त्यहाँ यी charactersतुहरू र अधिक श्रृंखलाहरू र एपिसोडहरू थिए, त्यसैले एक अर्थमा, मलाई सुरुबाट थाहा थियो कि यो एक हो राम्रो anime लगानी गर्न को लागी र, कि अर्थ मा, यो छ। यद्यपि तपाइँ पछि पात्रहरूको साथ समस्याहरूको सामना गर्न सक्नुहुनेछ, केही दृश्यहरूबाट पुरस्कार डाउनसाइड भन्दा धेरै ठूलो छ। म मोनोगाटारी श्रृंखलाको दोस्रो सत्र पनि समीक्षा गरेर खुसी छु, र अर्को लेखमा यसमा मेरो विचारहरू दिँदैछु।
तर सबै मा, Bakemonogatari हेर्न लायक छ, मैले उल्लेख गरेको कारण धेरै महत्त्वपूर्ण छ र ती सबै अधिकतर बिर्सिन सक्छ यदि तपाईं बस यो मा प्रवेश भने। वास्तवमा, मैले यो किन हेर्ने लायक नभएको कारणहरूमा जान गाह्रो भयो। कथा एकदम अद्वितीय छ, पात्रहरू पनि रमाईलो छन्, ध्वनि र भिजुअल डिजाइनहरू पोइन्टमा छन्, मलाई अरू के भन्नु आवश्यक छ? केवल कारणहरू याद गर्नुहोस् जुन यो हेर्न लायकको छैन, तपाइँलाई कहिले थाहा हुँदैन, तिनीहरूले केवल मद्दत गर्न सक्छन्। मलाई पनि तनाव हुनुपर्दछ कि मलाई श्रृंखलाको अन्त्य मन परेको थियो र राम्रो नोटमा छोड्नु राम्रो लाग्थ्यो, यदि तपाईले यसलाई कल गर्न सक्नु हुन्छ भने।
फेरि हामी आशा गर्दछौं कि यो लेख / ब्लग पोष्ट तपाईलाई सूचित गर्नमा यो प्रभावकारी भएको हुन्थ्यो जस्तो हुनुपर्दछ। हामी जोड दिन चाहन्छौं कि कुनै दिईएको राय / तर्क / POV वा हाम्रो ब्लग पोष्टहरूमा कुनै अन्य जानकारी हाम्रो राय मात्र हो र अरू केहि पनि छैन। पढ्नका लागि धन्यबाद हामीसँग धेरै ब्लग पोष्टहरू यस मार्गमा हुनेछन्।
टैग: एनिमे animeblog एनिमेब्लग तपाईको लागि एनिमी एपिसोडहरू तिम्रो लागि anime animereview anime समीक्षाहरू एनिमेसरीहरू एनिमेसरी बेकमोनो bakemonogatari bakemonogatariexplained bakemonogatarireview bakemonogatariseries bakemonogatariseriesfullreview bakemonogatari को पूर्ण समीक्षा isbakemonogatariworthit के हो? isbakemonogatari लायक हेर्दै हेर्न लायकको हो? monogatari मोनोगाटरिस्टरी themonogatariseries
अघिल्लो प्रविष्टि केइजो वर्थ हेर्दै छ?
अर्को प्रविष्टि भाँडा- A- प्रेमिका वर्थ हेर्दै हुनुहुन्छ?